Izinzuzo abhukudayo eziphumulele ogwini namuhla uthi bonke odokotela kanye ongoti ngoba indlela yokuphila enempilo. Nokho, izakhamuzi emadolobheni amaningi Russian ibhekene yokuthi inkathi ukugeza ihlala akukho kuka izinyanga 2-3. Ngokuvamile amanzi evulekile kuyinto ompofu emabhishi ayo ehlanzekile isifezo. Usuzo ebhukuda "off-inkathi 'kuyodingeka ukhohlwe? Unyaka wonke izakhamuzi zendawo Voronezh ukumema uphumule umzimba nomphefumulo wakho Waterpark "Chip". Voronezh - umuzi lapho isikhungo okukhulunywa yamanzi nemidlalo.
Incazelo Water Park
"Chip" - a eziyinkimbinkimbi zasendlini ezikhangayo amanzi ezifana ukusebenza unyaka wonke. Ubude amanzi ipaki endaweni imayelana 5,000 m 2. On ensimini umxhwele elise amachibi eziningana ezinjalo, ugibele (kuhlanganise kakhulu), sauna, ukuphumula endaweni futhi ikhefi. Ayikho kweminyaka izivakashi usebenza ehlukile amanzi zezingane ebaleni lokudlala ukuze izivakashi omncane eziyinkimbinkimbi. Waterpark "Chip" (Voronezh) ifakwe imishini yesimanje kusukela ehola abakhiqizi European. I nangohlobo lwezinto ezikhangayo kuyinto ephelele amanzi ipaki yesimanje.
Waterpark "Chip" (Voronezh): isithombe kanye nencazelo ezikhangayo
Hlobo luni lokuzijabulisa silindele izivakashi eyinkimbinkimbi? Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa izivakashi, kakhulu "esibi" roller coaster - ". Isibhamu" a Amabili olinganiselayo, hhayi Uzalo abawasebenzisayo kubonakale ngempela ayinangozi. ubuqili babo buyinkohliso slide eshesha, phakathi kwesikhathi lapho saphela ngokuphelele ukuzizwa kobuso yokushutha, futhi kubonakala sengathi flying eweni. Kuningi yokuvela acacile izokwethulwa kanye ezimbili ende futhi okusezingeni eliphezulu Uzalo Kuvunguza. Waterpark "Chip" (Voronezh) ziyojabula izivakashi njengoba ezikhangayo umkhaya esezingeni eyinkimbinkimbi isilinganiso. Isakhiwo ine amachibi amadala amabili. Kokunye zijabulela amagagasi ulwandle, kukhona iziphethu, hydromassage zone. Ukuze izivakashi abafuna uphumule, futhi-ke usebenza Jacuzzi ezinkulu. Phakathi omdala nezindawo yezingane "lolwandle" - yokwenziwa ukuzilibazisa endaweni sunbeds. Ukuze izivakashi abasebasha egijima amanzi ebaleni lokudlala, kukhona kwamagquma amathathu ongaphakeme, ezihlukahlukene imithombo, nezimpophoma ukufakwa amanzi spray. Ngaphezu kwalokho, eziyinkimbinkimbi kungaba "inhlanzi uyaxebuka" futhi sauna Finnish.
Imininingwane yamanje izivakashi
Lapho uthenga ithikithi emnyango isivakashi eziyinkimbinkimbi ithola isongo. Kungasiza uthola siqu eydijithali yakho siqu futhi akhokhe ku cafe. Ungakhohlwa ukubeka imali kwi isongo (ukheshe noma credit card) empambanweni ithikithi ehhovisi ekhethekile, ngesikhathi uphume sokunikela epaki angasuswa bayiswa. Ngo kwekilasi elinde izivakashi ikhabethe futhi eshaweni ehlukile. Eduze amachibi ukubhukuda futhi endaweni yokuzijabulisa unomsebenzi abatakuli abafanelekayo, futhi kukhona isikhungo sezokwelapha esizeni. Lapho ngivakashele epaki amanzi ungakhohlwa ufunde ngokucophelela zonke amabhodi Imininingwane nemaphosta. Landela imiyalo ukuze usebenzise i wokudlala futhi ungashiyi izingane zingagadiwe. Bese usalindile nje ejabulisayo, futhi ngeke ufuna ukubuyela epaki amanzi "Chip". Voronezh, nahlulele by ukubuyekezwa izivakashi wanelisekile, kungase kubonakale kule edolobheni eliseningizimu emva ukuphumula okuhle maphakathi amanzi ezemidlalo.
Izindleko ukungena epaki amanzi kanye nezinsizakalo ahlobene
Yeka ukuthi kuyinto ithikithi i isikhungo yokuzijabulisa ngoba amanzi? Lona umbuzo efanele wonke umuntu wanquma ukuvakashela kulesi amanzi ipaki "Chip" (Voronezh). Ukubhaliswa lutholwa ngoba inombolo ethile amahora kanye rate ukusebenza ekhokhwa esihambelana / ngempelasonto. Imali yokungena kuyinto ruble 600-1000 abadala, iminyaka izingane ezingaphansi kweminyaka 3 khulula (ephelezelwa abazali). Emva kokuthi ukhokhe wokubhaliswa isivakashi angasebenzisa ngaphandle komkhawulo wonke ezikhangayo etholakalayo namasevisi ahlobene. Extras kuphela ukudla neziphuzo imenyu cafe. amanani ezifanele, njengasezinsukwini evamile okusheshayo ukudla yokudlela.
Ikheli, inombolo yocingo, Amahora okuvula
Waterpark "Chip" itholakala endaweni sesitimela of Voronezh. I ngqo nekheli eziyinkimbinkimbi: Ostuzhev Street 2B. Ukuze izivakashi ezifika ku izimoto yangasese, i yokupaka ongaphandle. Cwenga lwezikhathi yakho futhi yamanani zamanje ungabiza epaki amanzi "Chip" (Voronezh). Ucingo: (473) 232-52-00. Kwimodi ejwayelekile, eyinkimbinkimbi amanzi yokuzijabulisa ivuliwe kusukela ngoLwesibili kuya ngoLwesine kusukela 11,00 kuya 22.00 futhi kusukela ngoLwesihlanu kuze kube yiSonto - kusuka 11,00 kuya 23,00. UMsombuluko - usuku sanitary. izinguquko ezingenzeka esimisweni amaholide.
Ukubuyekezwa amanzi ukuzijabulisa isikhungo
Yini izakhamuzi Voronezh, ubelokhu epaki amanzi? Kuze kube manje, "Chip" - a eziyinkimbinkimbi eziyingqayizivele amanzi ezikhangayo esifundeni. Ngaphandle kwakhe, amapaki mini-amanzi eziqhutshwa ezinye amahhotela kanye sauna, kodwa ngokuvamile kungcono 1-2 amaslayidi ongaphakeme namachibi nge Jacuzzi. Nokho, akubona bonke izakhamuzi zedolobha like "Chip".
Izivakashi eziningi akhononde yokungazethembi ezikhangayo, ikakhulukazi emalungeni cishe wabopha phezu coaster roller. It is a iphuzu moot njengoba ukwandisa induduzo Uzalo can, usebenzisa pads esikhethekile Ukushushuluza ephephile, ayatholakala mahhala futhi njalo ukufinyelela inqwaba izivakashi. Okudumile izivakashi imicabango yabantu eziyinkimbinkimbi ezingezinhle ngokuphathelene nezinga umshini ohlanza amanzi, isimo sengqondo kwabasebenzi kanye Inani labasebenzi kule ndawo yamanzi nemidlalo. Iphunga chlorine nokungeneliseki abasebenzi isivakashi ukuzijabulisa izikhungo - lawa izinkinga kunezibonelo zalokho okwenzekayo amapaki amanzi amaningi ezweni lethu.
Nokho, epaki amanzi "Chip" (Voronezh) Ukubuyekezwa akanalo nje omubi. Abantu abaningi abahlala edolobheni kanye nesifunda iyindawo onjengawo, futhi bayakujabulela ukuza lapha njalo batusa lona abangane. Iholide ushiye imizwelo eyakhayo kuphela, uma ukuya epaki amanzi ajabule, kanti inkampani omuhle futhi ayigxilile imininingwane edabukisayo. Zama ukuvakashela ipaki amanzi mathupha futhi uveze umbono wakho siqu mayelana nale eziyinkimbinkimbi.
Izibani LED for ekhishini